Dhaqaatiir Ingiriis ah oo soo bandhigay qorshe lagu dawayn karo indho la’aanta | Somaliska
Dhaqaatiir iyo Quburo ka tirsan jaamacada University College London ee wadanka Ingiriiska ayaa soo bandhigay horumar weyn oo laga sameeyay qaabka loo daweyn karo dadka indhoolayaasha ah. Quburadaan oo cilmi baaristooda ku tijaabiyay xayawaanka dooliga ayay ku sheegeen in ay macquul tahay in qofka indhoolaha ah dib u dhis loogu sameeyo qeybta aragtida ee isha.
Nidaamka loo sameynayo dib u dhiska ayaa ah in lagu beero kaamirada isha mid la mid ah, taasoo si caadi ah ula shaqeynaysa xubnaha kale ee ay ka koobantahay isha. Cilmi baaristaan oo lagu tilmaamay horumarkii ugu muhiim sanaa ee laga sameeyay dhinaca daaweynta indho la’aanta ayaa ah mid wali biloow ah. Haddii lagu guuleysto ayaa lagu daaweyn karaa indho la’aanta ay keenaan cudurada iyo cimriga.
Dhaqaatiirta ayaa sheegay in ay macquul tahay in 5-ta sano ee soo socota tijaabo lagu sameyn karo bani’aadamka. Tijaabada ay ku sameeyeen dooliga ayaa waxay soo bandhigtay in aysan arintu ahayn mid wali laysku halayn karo balse qeyb ka mid ah lagu guuleystay.